မိခင်အဖြစ် ရာထူးတက်သွားတဲ့ နာမည်ကြီးထိုင်းမင်းသမီး Mew Nittha | News Bar Myanmar
မင်းသမီး Mew Nittha ကတော့ ထိုင်းအနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်နေသလို အောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းသစ်တစ်ခုရိုက်ကူးပြီးစီးခဲ့ပြီးနောက် Mew ဟာ ကလေးယူဖို့အတွက် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ယခုတော့ Mew ဟာ မိခင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရာထူးတက်သွားပြီလို့ဆိုရပါတော့မယ်။
မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တုန်းက Mew ဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ Instagram နဲ့ Youtube Channel တို့မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီစစ်ဆေးထားတာလေးကို တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ပေါင်းများစွာကတော့ Mew နဲ့ သူ့ရဲ့အမျိုးသားတို့အတွက် ထပ်တူဝမ်းသာရင်း ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Mew ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ရဲ့ IG မှာတော့ “ကြည့်ပြီးကြပြီလား? Happy Mew SS2 EP.1 ပါ။ ဘယ်လိုလဲ? ငါတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လို့ဒီလောက်တောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာလဲ?” ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ viedo လေးကို တင်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။
အရာရာပြီးပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Mew ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ယခုဆိုရင် သားသမီးရတနာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် သူမအတွက် ဂုဏ်ပြုရပါတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ယခင်ကတည်းက ပွင့်လင်းစွာပြောကြားထားပြီးဖြစ်တာမို့လို့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ မေမေ Mew အဖြစ် ပရိသတ်တွေနဲ့ အပျော်တွေမျှဝေဦးတော့မှာပါ။
Source: Mew’s official IG
Photos: IG & Twitter
Next James Jirayu နှင့် သူ၏တွဲဖက်သရုပ်ဆောင် ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးချောလေး (၈) ဦး »
Previous « TWICE’s Sana အတွက် Idol တစ်ယောက်ဖြစ်လာခြင်းဟာ သူမကို ဘယ်လိုမျိုး ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သလဲ